New ọmụmụ ekpughe panda ụtọ eze - News Ọchịchị
New ọmụmụ ekpughe panda ụtọ eze
na a ìsì uto ule, asatọ nke asatọ pandas ekweta — sugar bụ na-atọ ụtọ.
Na a ọhụrụ ọmụmụ si Wednesday, ndị ọkà mmụta sayensị na-etinye panda uto anabata ule, -eche ma na cuddly critters ga-ọbụna na-achọpụta ihe dị iche n'etiti mmiri nkịtị na-atọ ụtọ stof.
“N'ikwu ya n'ozuzu, ụmụ anụmanụ na-eri ihe na osisi nwere a ụtọ uto ihe nnabata n'ihi na-enyere ha aka ịchọpụta shuga n'ókè ndị dị na osisi ndị dị na isi mmalite nke calories,” kọwara Gary Beauchamp, director nke Monell Center na rụrụ research.
Ma n'adịghị ka ọtụtụ herbivores, pandas arapara otu osisi — achara — nke bụ notoriously ala on sugar.
Ya mere, ndị na-eme nnyocha na-eche ma — dị ka ọtụtụ carnivorous ụmụ anụmanụ, gụnyere nwamba — pandas ndị funahụrụ ha nwere ike ịchọpụta uto.
ebe ọ bụ na carnivores “unu erila osisi, adịghị kpọtụrụ shuga n'ókè, e nwere agaghịkwa a ọnọdụ maka ha ịnọgide na-enwe na-atọ ụtọ ihe nnabata ọtọ,” Beauchamp gwara AFP.
Ozizi bụ na achara-munching pandas, bụ ndị na-adịghị ka ihe a ga-gụrụ ọtụtụ ihe sugar, Ọ pụkwara ịbụ furu efu ha nwere ikike uto ụtọ ihe.
Deutsch: Giant panda na Ocean Park, Hong Kong (Photo Ebe E Si Nweta: Wikipedia)
Ma, ọ tụgharịa si pandas, dị ka ndị ọzọ herbivores, ka nwere a ezi-na-ekiri ụtọ eze.
Mgbe e nyere abụọ ọkwá nke mmiri mmiri, otu sweetened na onye na-adịghị, na asatọ pandas ala slurped ala sugary ime biya.
The nnyocha na-anwale a dịgasị iche iche nke shuga n'ókè, na nsonye fructose, glucose, sucrose, lactose, maltose, na galactose. N'ọnọdụ nile, -atọ ụtọ ihe ọṅụṅụ na-họọrọ, na karịsịa ndị na fructose na sucrose, nke ụmụ mmadụ aghọta dị ka sweetest.
The ọkà mmụta sayensị na-eji cellular analysis na-anọrọ ụtọ ihe nnabata mkpụrụ ndụ si pandas na bịara nwee ike igosi ha si meghachi omume shuga n'ókè.
Ha ịkọ nkọ pandas nwere ike ịnọgide na-arụ ọrụ ụtọ ihe nnabata mkpụrụ ndụ n'ihi na, n'ofè uto akpata, ha nwere ike ga-eji na n'ebe ndị dị ka pancreas na gootu aka na osisi mgbaze.
Ma ọ bụrụ na pandas n'anya ato uto, n'ihi gịnị ka ha na-eri ihe achara?
na ndọta-n'agha, pandas na-enwe ụtọ ihe oriri — gụnyere Washington si Kacha ọhụrụ panda cub Bao Bao, onye “na o doro anya na relishing ụtọ nduku dị ka a mbụ nri n'oge weaning,” kwuru Danielle Reed, bụ onye dere, ka akwụkwọ akụkọ e bipụtara na magazin PLOS ONE.
Ma pandas-mkpa nza nke achara, ma ọ bụ na ha na-arịa ọrịa. One amụma bụ na ahịhịa amị jupụtara osisi na-enye ihe dị mkpa, otú evolutionary mgbali emewo ha ka ha ịdabere naanị osisi.
Oz o nwere ike ịbụ nwalere, Beauchamp kwuru, bụ na n'ihi pandas, achara n'ezie na-atọ ka swiit.
Ka emechara, e nwere anya na-egosi dị iche iche ụmụ anụmanụ ahụmahụ oriri dị iche iche — dị ka aka wuru sweeteners, nke, n'ihi na pandas na ọtụtụ anụmanụ ndị ọzọ, adịghị nụrụ ụtọ ụtọ.
Akụkọ a, New ọmụmụ ekpughe panda ụtọ eze, na-syndicated si AFP na-ezitere ebe a na ikike. Copyright 2014 AFP. Ikike niile echekwabara
23483	0 Bao Bao, China, Danielle Reed, nri, Gary Beauchamp, Giant panda, sugar, Washington
← Twitter ramp elu foto nkekọrịta atụmatụ Na-echeta ndị njem n'ụgbọ MH 370 →